ကလေးကို ချော့တာလား ?? လာဘ်ထိုးတာလား ?? ခွဲခြားသိဖို့လို ..
Posted by Harry May 3, 2018
ဖေဖေ၊ မေမေတို့ရေ အချို့မိဘတေွက ကလေးတေွကို အရမ်းကိုအလိုလိုက်လွန်းပါတယ်။ ကလေးတေွက မိခင်၊ ဖခင်တေွအပါအဝင် မိမိအပေါ်မှာ ချစ်ခင်ယုယနေသူတေွရဲ့ ဂရုစိုက်မှု၊ အရေးပေးမှုတေွကို ဘယ်လိုရယူနိုင်တယ်ဆိုတာကို လေ့လာနေတတ်ကြတာပါ။ ထမင်းများများမစားဘဲနေပြလိုက်ရင် ကိုယ်လိုချင်တာကို ရတတ်တယ်လို့ ကလေးတေွရဲ့စိတ်မှာထင်မသွားအောင် မိဘတေွက ဂရုစိုက်ပေးရပါမယ်။
မိဘတေွအနေနဲ့ ကလေးကို ရေွးချယ်ခွင့်၊ လုပ်ခွင့်ကို ထိုက်သင့်သလောက်ပေးတာနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ အလိုလိုက်လွန်းခြင်း၊ စည်းကမ်းပျက်ခြင်း မဖြစ်အောင်လည်း သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ အချို့မိဘတေွအနေနဲ့ ကလေးကိုချော့တဲ့အနေနဲ့ ဘာလုပ်ရင် ကစားစရာဝယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ကတိစကားတေွနဲ့ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လည်းဝယ်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးက ချော့မြူတာမျိုးထက် ကလေးကို လာဘ်ထိုးတဲ့သဘောမျိုးသက်ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ဒီလိုနည်းလမ်းမျိုးကို မကြာခဏအသုံးပြုတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ မိဘတေွအနေနဲ့ ကလေးကိုထိန်းကျောင်းရာမှာ အရာရာဆင်ခြင်ပြီး သတိထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်နော်။
(အာဟာရဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာလှကြည်ရေးသားသည့် ရင်သေွးငယ်အာဟာရ သန္ဓေသားမှစ စာအုပ်မှကိုးကားပါသည်)